Soosaarayaasha Barafka Eos & Alaab-qeybiye |OEM Eos Warshada Barafka
Dib-u-cusboonaynta Maqaarka Sare ee IPL...
Dhammaan Taxanaha Diodes Diode Laser Power Sare 755 808 1064Nm Laser Soprano Ice Price Machine
Saddex mawjadaha dhererka ayaa isku mar soo baxa inta lagu jiro habka daaweynta, sida laga soo xigtay timo kala duwan, waxay ku shaqeysaa melanin ee papilla ee gunta hoose ee timaha follicle, oo kuleyliya melanin iyaga si ay u kiciyaan, taas oo ka saari karta timaha si sax ah. iyo si joogto ah.
Mashiinka Salon Ciribtirka Timaha Xirfadlayaasha Maskaxda ee ugu Fiican
Eos Ice Prime waxay isticmaashaa 1600W awooda sare ee saxda ah ee saxda ah ee saddex-wavelength (Alex755nm, Diode 808nm, Yag 1064nm) tignoolajiyada saxda ah ee daaweynta.Tamartu waxay si toos ah ugu shaqaysaa nudaha follicle timaha ee maqaarka.
Alma Platinum 808Nm Diode Laser Rejuvenation Maqaarka Quruxda
Laysarka saddex-mawjadaha dhererka ah waxaa loo isticmaalaa in lagu qanciyo daawaynta maqaarka iyo timaha kala duwan.Laser-ka garaaca badan ee sida gaarka ah loo nashqadeeyey waxa uu timaha timaha ku kululeeyaa 65°C iyo in ka badan oo hoos yimaada cufnaanta tamarta sare.
Ciribtirka timaha Laser-ka Dumarka Soprano Ice Diode Laser Machine Qiimaha
Isku darka heerka nuugista sare ee hirarka dhererka 808nm, tamarta xoogga leh ee 755nm iyo badbaadada hirarka dhererka 1064nm ayaa si fiican isku mid ah.Isticmaalka aragtida nuugista iftiinka ee xulashada, leysarka waxaa si doorbidan u nuugi kara melanin-ka timaha ka dibna wuxuu kululeynayaa timaha timaha iyo xudunta timaha, sidoo kale si loo burburiyo follicle timaha iyo ururka ogsijiinta ee agagaarka timaha follicle.
Iftiinka Sheer Alxander Diode Laser 808Nm Timaha Ka Saarida Mashiinka Shakhsiyeedka
Waxay isticmaashaa laser gaar ah oo leh 3 mawjadaha dhererka-808nm/755nm/1064nm kaas oo geli kara meesha timaha.Isticmaalka aragtida nuugista iftiinka ee xulashada, laysarka waxaa si doorbidan u nuugi kara melanin ee timaha ka dibna diiriyaa timaha timaha iyo xudunta timaha, sidoo kale si loo burburiyo follicle timaha iyo ururka ogsijiinta ee agagaarka timaha follicle.
Tec Qaboojinta Joogtada ah ee Timaha Salon ee Jirka Qalabka 808Nm Diode Laser Mashiinka Ciribtirka Timaha
Isticmaalka aragtida nuugista iftiinka ee xulashada, laysarka waxaa si doorbidan u nuugi kara melanin ee timaha ka dibna diiriyaa timaha timaha iyo xudunta timaha, sidoo kale si loo burburiyo follicle timaha iyo ururka ogsijiinta ee agagaarka timaha follicle.
3 Mawjadaha Dhererka Diode Mashiinka Ciribtirka Timaha